Dhageyso Barnaamijka Nasashada SBC oo baxa Maalin kasta oo jimce ah. – SBC
Dhageyso Barnaamijka Nasashada SBC oo baxa Maalin kasta oo jimce ah.
Barnaamijka nasashada SBC oo Jimce kasta ka baxa Idaacada SBC International, islamarkaana la soo fariisiyo Masuuliyiin ka tirsan Puntland gaar ahaan kuwa Degmooyinka iyo qeybaha kala duwan ee Xukuumada ayaa waxaa maanta ka qeyb qaadanayay Xildhibaano katirsan dowlada Hoose ee Magaalada Boosaaso .
Dadweynaha Magaalada Boosaaso ayaa Barnaamijka ku weydiinaya Su’aalo ku aadan Hadba Mowduuca ay ka hadlayaan,
Maanta Waxaa ku suganaa Barnaamijka Xildhibaanada kala ah Bootaan Axmed Bootaan iyo Xildhibaan C/wali Siciid Xirsi, waxaanay maanta ka hadlayeen Arimo ku aadan Dhameystirka Wadooyinka Boosaaso iyo weliba arimo ku aadan Fayadhowrka.
Dhageyso B NASASHADA _____13_01_2012
Barnaamijkan Waxa uu baxaa maalin kasta oo Jimce ah Waxaana diirada lagu saara hadba mowduuca taagan, iyadoo ay ka qeyb qaataan dadweynaha Soomaaliyeed meelkasta oo ay joogaan Siiba deegaanada Puntland.